» “फेरि पार्टी एकता,को लागि एमालेले, पहल गर्ने” के फेरि एमाले पार्टी एकता होला?? “फेरि पार्टी एकता,को लागि एमालेले, पहल गर्ने” के फेरि एमाले पार्टी एकता होला?? – हाम्रो खबर
“फेरि पार्टी एकता,को लागि एमालेले, पहल गर्ने” के फेरि एमाले पार्टी एकता होला??
“काठमाडौं– नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निचोडबारे टोली नेताले ‘बिफ्रिङ’ गरेका छन् । शनिबारको बैठकमा समूहगत छलफलको निचोड प्रस्तुत गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।”
“राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको थियो । समूगत छलफलको निचोडअनुरूप जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गनिर्देशनमा नेपालको लोकतान्त्रिक जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टीको कार्यदिशा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष समूहगत छलफलबाट आएको उनले बताए ।”
“जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गनिर्देशनमा हामीले ०६२–६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्ति र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा एउटा क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ । नेपालमा लोकतान्त्रिक जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ,” उनले भने, “अब नेपाली समाजमा रहेका पछौटे, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली छन् । ती कुरामा रूपान्तरण गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टीको कार्यदिशाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धेरै टोलीका साथीहरूको सुझाव आएको छ ।”
“एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतीक र प्रवृत्ति भएकाले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कार्यभार एमाले नै पूरा गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा प्रस्तुत भएको उनले जानकारी दिए ।”
“यसैगरी, एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नहुने सुझाव पनि आएको उनले जानकारी दिए । त्यो कार्यान्वयन भइरहेको विधानमा पनि व्यवस्था रहेको उनले बताए । ७० वर्षे उमेरहद पनि कायमै राखिएको छ”।
“आइतबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने र आएका सुझावमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूले जवाफ दिने भट्टराईले जानकारी दिए । एमालेको यही असोज १५–१७ गतेसम्मका लागि तोकिएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमाथि छलफल भइरहेको हो ।”